Ibhotwe laseJassal - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguGordip
IJassal Palace yindlu epholileyo, ikona eninzi enendawo entle, kufutshane nolwandle. Inamagumbi okulala amathandathu (6) anefenitshala epheleleyo alungele ukuhlala umntu omnye/aphindwe kabini/aphindwe kathathu. Kukho izindlu zangasese ezi-5.
Udweliswe kwi-12 pax yokuhlala. Isicelo sepaksi eyongezelelweyo masixelelwe kwangethuba malunga nezinto eziyimfuneko zokulala nelinen ngeendleko ezongezelelweyo. Ixesha lokungena : 2pm. Ixesha lokuphuma: 11am. Ngena kwangethuba kwaye jonga emva kwexesha kuphela ngesivumelwano sangaphambili
Indawo yokupaka iimoto ezi-5.
Indawo egqibeleleyo yeSTAYCAY
IJassal Palace ikwisango elivulekileyo elinendawo yokhuseleko eBayshore Lutong. Yindlu ecocekileyo negcinwe kakuhle. Kukho ulwandle / icala lolwandle malunga neemitha ezingama-500 ukusuka kwisango eliphambili lokhuseleko
Kukho igadi encinci enengca esikiweyo ecaleni kwendlu
Ihood yaseMelwane inobuhlobo kakhulu kwaye bonke bangamagcisa ahlala neentsapho zabo
Umbuki zindwendwe ngu- Gordip
I have spent most of my time in the oceans and seas of the world sailing commercial and personal boats ... I have now decided to enjoy my life and let my hosts enjoy their stay as well.
Ubumfihlo obugcweleyo bunikwa iindwendwe ngalo lonke ixesha. Amagumbi awaqeshwanga ngabanye
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lutong